Dooni Hub farabadan usoo waday Soomaaliya oo la qabtay - iftineducation.com
Dooni Hub farabadan usoo waday Soomaaliya oo la qabtay
iftineducation.com – Markab Dagaal oo laga leeyahay dalka Australia awaxay gacanta ku dhigeen Dooni Kalluumeysi oo waday in ku dhow 2-kun oo qoryaha AK 47.
Koox ka tirsan Ciiddanka la socday Markabka laga leeyahay dalka Australia ee lagu magacaabo HMAS Darwin waxay Doonidaasi ku qabteen meel 300-KM ka baxsan Xeebaha dalka Cumaan.
Taliyaha Hawlgalladda Isku-dhafka ee Australia, Admiral David Johnston ayaa sheegay in lagu guuleystay in la qabto doonidaasi, iyadoo baaritaan kadib laga helay 1989 qoryaha AK 47, 100 Gantaalladda laga tuuro Baasuukaha, 49 qoryaha Boobaha iyo Hoobiyayaal.
Waxa uu tilmaamay in Hubkaasi lagu dhex qariyey Shabaagta Kalluumeysiga.
Qabashadda Hubkaasi ayaa waxa uu qeyb ka yahay Hawlgaladda lagu fulinayo Cunaqabataynta Hubka ee ay QM ku soo rogtay Somalia, waxayna Maraakiibta Dagaalka ee Australia qeyb ka yihiin Maraakiibta Caalamiga ee La-dagaalanka Burcad-baddeeda, Argagixisadda iyo Ka-hortagga Hubka iyo Daroogadda ee lagu soo qariyo Doonyaha isticmaala Badda Somalia.
Farxiyo “Nin i qancin kara Oo Gus adag leh ayaan rabaa ..afrika nin jooga ku qaldamay…”